Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. श्रीलंकामा दुईजना प्रधानमन्त्रीबीच झगडा चर्किदै – Emountain TV
श्रीलंकामा दुईजना प्रधानमन्त्रीबीच झगडा चर्किदै
एजेन्सी, २० कात्तिक । श्रीलङ्कामा राष्ट्रपतिबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षे र बर्खास्तमा परेका प्रधानमन्त्री रनीलविक्रम सिंघेबीचको झगडा झनझन चर्किदै गएको छ । दुबै नेताबीचको राजनीतिक दाउपेचले श्रीलंकामा राजनीतिक संङकट गहिरिँदै गएको छ ।
श्रीलङ्काका सभामुखले महिन्दा राजपाक्षेलाई संसदमा बहुमत प्रमाणित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएका महिन्दा राजपाक्षेलाई श्रीलङ्काका सभामुखले संसदमा बहुमत प्रमाणित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा स्वीकार नगर्ने भनेपछि शक्ति प्रदर्शन भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीबाट हटाइएका रनिलबिक्रम सिंघेले संसदमा आफुसंग बहुमत कायमै रहेकाले आफु नै प्रधानमन्त्री रहेको दाबी गरेका छन् । सिंघेले उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नु असम्बैधानिक कदम भएको बताएका छन् ।
सभामुख जय सुर्याले अक्टोम्बर २६ अगाडीकै अवस्था स्वीकार गरि रनिल विक्रम सिंघेलाई आफुहरुले सर्मथन गर्ने कुरा जानकारी गराएका थिए । श्रीलंङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले संसदको बैठक १४ नोभेम्बरका दिन बोलाइने घोषणा गरेका छन् ।
श्रीलङ्कामा एक अर्काबीच आरोप प्रत्यारोप सहित शक्ति प्रदर्शन गर्दै राजनीतिक संकट बढ्दै गएपछि सर्वसाधारणले असहज महसुस गर्न थालेका छन् । महिन्द्रा राजपाक्षेले उनीसंग एक सय १३ सांसदको समर्थन प्राप्त रहेको दाबी गरेका छन् । जबकी त्यसलाई बर्खास्त प्रधानमन्त्रीले हावादारी दाबी गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
जबसम्म संसदमा बहुमत साबित हुँदैन तबसम्म राजनीतिक संकट यथावत रहिरहने अवस्था छ । राष्ट्रपति र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजपाक्षे विचको साठगाठले श्रीलङ्कामा राजनितीक संकट चुलिएको छ ।